Wasiirka Haweenka iyo xuquuqda Aadanaha Soomaaliya oo la kulantay Ban Ki-moon – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
New York – Mareeg.com: Wasiirka Hormarinta Haweenka iyo Xuquuqda Aadanaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Khadiijo Maxamed Diiriye oo socdaal shaqo ku joogta dalka Mareykanka ayaa magaalada New York kulan gaar ah kula qaadatay xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban-Ki Moon.
Wasiiradda ayaa ugu horeyn uga mahad celisay xoghayaha guud ee QM Ban Ki Moon qaabilaada iyo soo dhaweynta uu u sameeyey waxaanaay uga warbixisay halka ay marayso xaaladda Haweenka Soomaaliyeed iyo qorshayaasha ay Wasaaraddu u dejisay hormarinta Haweenka iyo xuquuqda Aadanaha iyo sidoo kale carruurta Soomaaliyeed.
Xoghayaha guud ee QM Ban Ki Moon oo isna dhankiisa kulanka ka hadlay ayaa aad u bogaadiyey dadaallada ay Wasaaradda Haweenka iyo Hormarinta xuquuqda Aadanaha wado ee lagu hormarinayo haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed, waxaana uu ballan qaaday in Qaramada Midoobay hay’adaheeda kala duwan ay kala shaqeyn doonaan arrimaha Haweenka iyo Xuquuqda Aadanaha Soomaaliya.
Wafdi ay hogaamineyso Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka, Khadiijo Maxamed Diiriye ee ku sugan dalka Mareykanka ayaa halkaasi uga qeybgalay kulanka 58-aad ee Haweenka Caalamka.
Waxey aheyd markii ugu horeysay oo wafdi metelaya Soomaaliya ay ka qeybgalaan mudo 20 sano ah kadib.